I-Huawei FreeLace, sihlalutya ezi ntloko zinee-headphone | Iindaba zeGajethi
I-Huawei FreeLace, siphonononga ezi ntloko zentloko zibhetyebhetye
Njengoko usazi kakuhle, besiseParis sibona ukumiliselwa kwe-P30 Series yeHuawei, kunye noluhlu lweendaba zenqanaba lesandi apho inkampani yaseTshayina izimisele ukusibonisa ubumnandi. Enye yezo mveliso zintsha ngokuchanekileyo zii-headphone ezingenazingcingo IHuawei Simahla.
Ezi ntloko zentloko zingenisa isiphelo esiphakamileyo kwintengiso egcwele iimveliso ezifanayo. Ke Sifuna ukuba uhlale nathi ukuze ubone uhlalutyo olunzulu lweHuawei FreeLace kwaye ufumane yonke into onokuyixelela ngayo. Siya apho kunye nohlalutyo kunye neempawu zeefowuni ezintsha ze-Huawei ezingenazingcingo.
Njengamaxesha onke, siza kuthatha ukhenketho lwezona zinto zinomdla kakhulu ezi zineLace yasimahla yeHuawei inayo ungathenga malunga ne-99,99 euro ngokukhawuleza xa bethengisa, kuba uphawu alusibonisanga mihla ngqo. Nokuba kungayintoni na, siza kujonga kwiinkcukacha ezincinci ezinje ngomgangatho wolwakhiwo, kunye nezinye iinkcukacha ezicace gca ezinjengokuzimela, kodwa sicebisa ukuba udlule kule vidiyo siyishiyeyo kwisitishi se-YouTube soogxa be-Androidsis kwaye oko kukhokelela koku Uhlalutyo, Masihambe!
1 Unboxing, uyilo kunye nezixhobo
3 Ukuzimela kunye nomgangatho wesandi
4 Iimpawu ezahlulayo kunye noluvo lomhleli
Unboxing, uyilo kunye nezixhobo
Kule nkalo uHuawei unokuthi ukhethe ukungazibeki emngciphekweni kakhulu, ngokucacileyo kufana nezinye izixhobo ezikuluhlu olufanayo ezikhoyo kumashishini afana ne-SoundPeats, nantsi into eyahlukileyo ebekwe nguHuawei ngokucacileyo kwiinkcukacha, umzekelo wokuqala kukusebenza kwezinto, Sifumana irabha ezithe tyaba ngohlobo oluchanekileyo lokuthintela ukubanjwa, kunye nee-headphone zenziwe nge-aluminium efanayo neziphelo zombini ze "khola", kwenye sizakufumana i-USB-C kunye nolawulo lwe-multimedia, kwi enye ibhetri kuphela.
Siza kukwazi ukuzithenga kwiziphelo ezine ezahlukeneyo: I-Moonlight Silver, i-Emerald Green, i-Amber Sunrise kunye ne-Graphite, ngokuqinisekileyo i-Chinese firm ibheja kumbala, nangona kuhlalutyo lwethu sivavanye uhlobo olumnyama. Ndimele nditsho ukuba iHuawei isebenze kakhulu ekupakisheni, Sifumene inkqubo yohlobo lwebhokisi yencwadi esemgangathweni odumileyo kwaye eya kusikhumbuza kwangoko ukuba sijamelene nesiphelo esiphezulu seHuawei. Asifumani kwibhokisi, ewe, iadaptha yamandla, kuphela i-USB-C ukuya kwi-USB-Intambo yokuguqula ukubiza ii-headphone zethu, kunye noluhlu lweepads zeendlebe ezinobungakanani obahlukeneyo kuzo zonke izinto ozithandayo.
Sinayo Inye nganye yee-headphone umqhubi we-9,2 millimeter oqulunqwe yi-TPU diaphragm kunye ne-titanium membrane engenanto kwaye akukho nto ingaphantsi. Inyani yile yokuba isandi sicacile kwaye siyasivumela ukuba sahlule uluhlu olubanzi lwezixhobo ngaphakathi kwengoma enye, into efanelekileyo kakhulu. Kodwa inyani kukuba ukungabikho kokufakwa kwesandi okubalulekileyo kubangela ukuba ii-bass zilahleke rhoqo xa ii-headphone zingacinezelwanga. U-Huawei ufune ukubonelela ngemveliso ekumgangatho ophezulu, kodwa ngokokujonga kwam baswele ivolumu.
Asinalo ulwazi oluthile malunga nohlobo oluthile lonxibelelwano, kodwa asithandabuzi ukuba iHuawei isebenzise iBluetooth 5.0 kwesi sixhobo (engekaqinisekiswa). Ngendlela enye, into esinayo kukuchasana namanzi kunye nokubila i-IPX5 ngenxa yoko ukuyisebenzisa kwezemidlalo akujongwa njengomqobo. Ekusebenziseni kwam ubuqu kuye kwafuneka ndiyiphephe le njongo okoko ndilahle olu hlobo lwee-headphone, nangona kunjalo, zezona zixhaphakileyo kwaye inyani yokuba nenkqubo yekhola iya kuthi nangayiphi na indlela ibathintele ekubeni badibane nomhlaba kwaye babandezeleke uhlobo lomonakalo.
Ukuzimela kunye nomgangatho wesandi
Kwinqanaba lokuzimela, iHuawei ayabelananga ncam nomthamo we-mAh weebhetri zayo, kodwa bayasiqinisekisa ukuba ngenqanaba lokusetyenziswa komthamo ophakathi iyakwazi ukusinika iiyure ezili-18 zokudlala komculo kwaye zijikeleze i-14 ukuba sisebenzisa ii-microphone Ukufowuna. Ukuzimela okumangalisayo esikwazileyo ukukuthelekisa ngokujikeleza Iiyure ezili-17 kumanqanaba aphezulu aphakathi. Ngakolunye uhlangothi, ngentlawulo yemizuzu emihlanu kwaye enkosi kwinkqubo yayo "yokuhlawulisa ngokukhawuleza", siyakwazi ukufezekisa iiyure ezine zokuzimela.
Umgangatho wesandi kukuba lolu hlobo lwee-headphone, sinomthamo ophakathi kunye nolwahluko ocacileyo wezandi ezahlukeneyo, nangona iwela ekubeni kungabikho bass xa ukubekwa kungagqibekanga kwaye iiadaptha zeendlebe azikhuseli ngokufanelekileyo ngaphandle. Izinto ziyatshintsha xa uzibeke ngokuchanekileyo, i-bass ibonakala ingenakulinganiswa, kodwa kweli candelo liya kuxhomekeka kakhulu kulungelelwaniso lomsebenzisi ngamnye kolu hlobo lweentloko. Ngaphandle koko bayayithobela, ngaphandle kokuzonwabisa kakhulu, kwaye kuthathelwa ingqalelo ubungakanani babo obuncinci. Njengesiqhelo, Asinakulibala ukuba banemakrofoni zeefowuni kunye nenkqubo yokulungisa ingxolo yomoya ukuze ingaphazamisi iifowuni zethu.
Iimpawu ezahlulayo kunye noluvo lomhleli
Enye yezona zinto zinomtsalane kwezi headphone yicla yayor, banomazibuthe emazantsi esixhobo ngasinye sokuva esiza kuthi "sibajoyine" xa beziswa kufutshane, ayizukuvumela kuphela ukuba sizithwale ngaphandle kokuzigcina, kodwa ikwanaso nesenzwa esiya kuthi ngokuzenzekelayo misa umculo xa sizidibanisa, kwaye uya kuwuphinda usebenze kwakhona xa sizibeka ezindlebeni zethu, kwaye oku kukuthuthuzela okwenziwe ngee-headphone.
Umgangatho omkhulu wezixhobo kunye noyilo olunonopheleyo
Iimpawu ezikhethekileyo ezinje ngokudlala ngokuzenzekelayo kunye nokunqumama
Inkqubo engazange ibonwe ngaphambili ye-USB-C
Isandi sindishiyile "kubanda" okuncinci, bendilindele ngaphezulu
Kubonakala kum ukuba zinde kakhulu
Banazo iifayile ze- Inkqubo entsha yeHuawei, Oku kuyasivumela ukuba sisebenzise ngokulula uqhagamshelo lwayo lwendoda lwe-USB-C ukuziqhagamshela ngokuthe ngqo kwi-smartphone yeHuawei kwaye ziya kuqwalaselwa ngokuzenzekelayo, ngaphandle kwesidingo sokwenza naluphi na uhlobo loqhagamshelo lweBluetooth. I-logo yee-headphone iya kuvela kwiscreen kwaye umculo uya kuqala ukuhamba. Ngokuqinisekileyo uHuawei ubeke icing kuluhlu lweefowuni yokhuphiswano olunokhuphiswano oluninzi, nangona kunjalo, ixabiso kunokuba yeyona nto ibalulekileyo xa ucinga ukuba ukhuphiswano lunikezelwa ngaphantsi kwesiqingatha. Asinayo ngqo imihla yokuphehlelelwa kweHuawei FreeLance, kodwa inkampani iqinisekisa amaxabiso ee-99,99 zeemarike kwimarike yaseSpain.
IHuawei FreeLace-Uhlalutyo, ixabiso kunye neempawu
Uphengululo lwe: UMiguel Hernandez Gutierrez
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Huawei FreeLace, siphonononga ezi ntloko zentloko zibhetyebhetye
Kwenzeka ntoni ukuba ndibhloka umntu kuWhatsApp
Ukuphonononga isithethi esisebenzisa amandla eSistem 5